“Kenya Waxaanu Ku Tagnay Baasaboorka Somaliland…” Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye – somalilandtoday.com
“Kenya Waxaanu Ku Tagnay Baasaboorka Somaliland…” Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye
(SLT-Hargeysa)-Guddoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka dhaqaalaha iyo maaliyada ee golaha wakiilada Somaliland Maxamuud Axmed Obsiiye oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiiladda Somaliland, kana mid ahaa wefti heer qaran ah oo socdaal ku tegay dalka Kenya, kulamo kala duwanna la soo yeeshay madax kala duwan oo ku sugan dalka Kenya, ayaa ka hadlay socdaalka ay Kenya ku tageen.
Xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye, waxa kale oo uu ka hadlay baasaboorka ay ku safreen ee ay Kenya ku tageen, waxaanu sheegay in isaga iyo xubnaha weftigii socdaalka ku wehelinayay ba ay si rasmi ah ugu tageen dalka Kenya baasaboorka Somaliland.
Mudane Obsiiye, isaga oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Ujeedada socdaalkii aanu ku tagnay magaalada Nayroobi ee dalka Kenya waxa uu ahaa sidii aanu xogogaal ugu noqon lahayn mashaariicaha uu baanku adduunku ka wado dalka Somaliland. waxaa ugu wayn mashaariicaha ay wadaan mashruuca dib u habaynta shaqaalaha dawladda iyo mashruuca PFM-ka ee dib u habaynta maaliyadda. markaa in aanu ka war helno waxyaabihii uga qamsoomay mashaariicdaa ayaanu u tagnay dalka Kenya.”
Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa raaciyay “waxaanu danaynayaa baanku adduunku inuu wada shaqayn la yeesho baanka dhexe ee Somaliland si uu hawshiisa u guto,taasoo ay ku xidhantahay xeerar fara badan oo ku saabsan baananka, baanka dhexena qayb ayuu ka ahaa socdaalkaa,waxaana golaha horyaalla xeerka maydhista lacagaha iyo xeerarka xawaaladaha dhawaan ayaana golaha la soo hordhigii doonaa,waxa kale oo jira xeerka baananka ganacsiga oo golaha wakiiladu madaxweynaha dib ugu celiyay si uu ugala tashado culimada iyo cidda ay khusayso waxaanan filaynaa in dib loogu soo celin doono golaha si looga doodo oo loo ansixiyo,”.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in ay u soo bandhigeen siyaasada Somaliland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo ay kula kulmeen magaalada Nayroobi.waxaanu yidhi“Waxa kale oo aanu la kulanay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya waxaanay danaynayaan inay xogogaal u noqdaan meesha ay Somaliland marayso,waxaanay ahayd fursad aanu ku gudbinay siyaasada arimaha dibedda ee Somaliland waxaanay ballan qaadeen in ay socdaal ku iman doonaan Somaliland.”
Ugu dambayn waxaa uu sheegay xildhibaanku in Somaliland iyo Kenya xidhiidh wanaagsan ay leeyihiin, isla markaana ay dalkaa ku galeen baasaboorka Somaliland, waxaanu yidhi “waxaannu ku dhoofnay baasaboorka Somaliland, taasina waxa ay muujinaysaa in xidhiidh qoto dheeri ka dhaxeeyo Somaliland iyo Kenya.
Safaarada Somaliland ee Kenya qaab aad u wanaagsana ayay u shaqaysaa. waxaana madaxda safaaradu noo sheegeen in dalka Kenya ay dhawaan safaarad ka furan doonto Somaliland. waana tallaabo aad u wanaagsan oo ah xoojinta xidhiidhka aynu la yeelanayno wadamada Afrika,”.
Xildhibaanka oo ka hadlayay tallaabadii madaxweynuhu dib gacanta dawladda uu ugu soo celiyay haamaha shidaalka Berbera iyo ammaanka iyo baarkinka madaarka caalamiga ah ee Cigaal ee Hargeysa, ayaa yidhi. “Aad ayaan ugu diirsanay in xukuumaddu la wareegto maamulka haamaha kaydka shiidaalka ee Berbera iyo amniga baarkinka madaarka Hargaysa waxaanu madaxweynuhu xaqiijiyay in sharciyaddii dalka lagu dhaqmo oo wixii sharciya la fuliyo,waana arrin loo baahnaa in hantida qaranka la soo celiyo waanan ku taageeraynaa tallaabadaa uu qaaday madaxweynuhu.”
Guddoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka dhaqaalaha iyo maaliyada ee golaha wakiilada Somaliland Maxamuud Axmed Obsiiye, waxa uu intaasi raaciyay “waana in la soo celiyo wixii hanti guud ah ee si sharci darro ah u gashay gacanta shakhsiyaad ama shirkado gaar loo leeyahay gaar ahaan adeegga bulshada sida laydhka caafimaadka iyo biyaha waana in ay ahaadaan adeeg dawladeed.”